Izinto zomhlaza - Izinto Ezi-4
Eyona Izinto Ezi-4 Izinto zomhlaza
Into yophawu lweCancer zodiac nguManzi. Le nto ifanekisela ukuqaqamba, ubuntununtunu kunye nokuqonda. Umjikelo wamanzi ukwabandakanya neempawu zeZodiac zeScorpio kunye nePisces.
inyanga kwintombi ebonakalayo
Abantu bamanzi bachazwa njengabayili, abonwabisayo nabanomtsalane. Banengqiqo kuyo yonke imimangaliso yehlabathi kwaye batyekele kwicala lokomoya.
Le migca ilandelayo izakuzama ukubonisa ukuba ziimpawu zini zomhlaza eziphenjelelwa ngamandla aManzi kunye neziphumo ezivela kwimibutho yaManzi nezinye izinto ezintathu zomqondiso weenkwenkwezi onguMlilo, uMhlaba noMoya.
Makhe sibone ukuba bangayiphi indlela abantu beCancer abaphenjelelwa ngayo ngamandla aManzi!
Abantu abanomhlaza banovelwano kwaye banemvakalelo kodwa banamabhongo kwaye banomdla xa iinjongo eziphezulu zibamba umdla wabo. Bafuna ukufezekisa ukhuseleko ebomini babo kodwa kwangaxeshanye bazimisele ukuya esiphelweni sehlabathi ngamaphupha abo kunye nolindelo lwabo. Amanzi anokuzenza ukuba zibe nolwelo ngakumbi, zikhawuleze ukutshintsha kwaye kunzima ukuzilawula kunye nokuziqulatha.
8/22 uphawu lweenkwenkwezi
Inxalenye yaManzi kuMhlaza ikwadityaniswa kwindlu yesine yosapho kunye nokuthuthuzela ekhaya kunye nomgangatho wekhadinali. Oku kuthetha ukuba phakathi kweempawu zodiacac phantsi kwaManzi, iCancer yeyona inomdla wokuthatha amanyathelo, ngubani ongakhathaliyo kodwa kwangaxeshanye oyile kwaye uzimisele ukuthatha umngcipheko.
Unxibelelwano nezinye iimpawu zomqondiso weenkwenkwezi:
Amanzi ngokudibana noMlilo (ii-Aries, i-Leo, i-Sagittarius): Ukufudumeza emva koko kwenza izinto zibile kwaye kunokuba yinto yokudibanisa enzima efuna ulumkiso xa ulawula.
Amanzi ngokudibana noMoya (iGemini, iLibra, iAquarius): Olu dibana luxhomekeke kwiimpawu zoMoya, ukuba umoya ufudumele amanzi agcina iipropathi zawo kodwa ukuba umoya uyavutha, amanzi anokuvelisa umphunga.
Amanzi ngokubambisana noMhlaba (iTaurus, iVirgo, iCapricorn): Eyokuqala ingabonisa umhlaba ngendlela ethambileyo ngelixa uMhlaba unokuba nomsindo kwaye unike isizathu sobumanzi bamanzi.
Indoda yoMhlaza ebhedini: Yintoni onokuyilindela kunye nendlela yokuMvula
Juni 28 Imihla yokuzalwa
Iimpawu zeZodiac zikaJanuwari 1
ijupiter kwindlu yesi-2
nguwuphi umqondiso ongu-nov 22
ungamfumana njani umfazi onomhlaza
yintoni eguqula umntu onomhlaza kwisondo
nguwuphi umqondiso ngoDisemba 17